စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 03/07/2020)
အတိတ်ကာလကျော် 10 နှစ်ပေါင်း, သန်းပေါင်းများစွာကမီးရထားယူသည်မည်မျှအကျိုးရှိနေသေးတယ်ပါပြီ! စိမ်းလန်းသော၏ကြွယ်ဝသောလယ်ကွင်း, တောက်ပကမ်းရိုးတန်းနှင့်ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့တောင်ကြီးတောင်ငယ် ကျောက်တန်း that are never mentioned in travel brochures or blogs. ရထားယူပြီးပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်, အဆင်ပြေပြေနဲ့အမှတ် B ကိုမှအမှတ် A ကနေရမယ့်ပိုက်ဆံအိတ်-ဖော်ရွေလမ်း, ဒါနှစ်ကြိမ်မစဉ်းစားကြဘူး, ရထားယူ!
ဥရောပ၌ရထားများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရထားများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒုတိယအကြီးမြတ်သောအချက်မှာ၎င်းတို့သည်မည်မျှဘတ်ဂျက်နှင့်အဆင်ပြေနိုင်မည်နည်း. အဲဒီမှာဤမျှလောက်များစွာသောများမှာမသာ စျေးပေါနေရာများ ကနေရှေးခယျြဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းယေဘုယျခရီးသွားကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ခုတ်လှဲဖို့မရေမတွက်နိုင်သောနည်းလမ်းများ. ဒါကြောင့်သင်ကတစ်ချိန်ချိန်မှာမကြာမီမီးရထား hit မှတမ်းတနေလျှင်, ဤနေရာတွင်သုံးစွဲဖို့အနည်းငယ်ကြီးမြတ်အကြံပေးချက်များများမှာ:
သငျသညျဖွစျစေ ခရီးသွားခြင်းကိုနှစ်သက်သောကျောင်းသားတစ် ဦး ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်ခရီးသွားတစ်ဦးနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာရထားယူ, ရထားပေါ်တွင်အိပ်ပျော်နေသောအလားအလာနီးပါးဝက်အတွင်းနေရာထိုင်ခင်းပေါ်သုံးစွဲငွေကိုခုတ်လှဲနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာသင်သည်အခြားတမြို့အတွက်အိပ်ပျော်နှင့်နိုးထလွန်းအဖြစ်အချိန်ကုန်သက်သာဖို့မယုံနိုင်စရာလမ်းဖွင့်. သူကပြောပါတယ်ဘဲလျက်, ညဥ့်ရထားနေရာထိုင်ခင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်ရဲ့.
သင့်ကိုယ်ပိုင်အစားအသောက်ထုပ်ပိုးဝေးကလည်ဖို့စျေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. မတူတာက ပုံမှန်ခရီး ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်တစ်ကား, သင်တစ်ဦးရထားယူသည့်အခါ သင်အမှန်တကယ်အငြိမ့်ကိုစားနိုင်ပါတယ်. အများစုကထိုင်ခုံနှစ်ခုထိုင်ခုံအကြားတစ်ဦးဆွဲထွက်စားပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ် fixed စားပွဲပေါ်မှာရှိ. သို့သျောလညျး, သငျသညျမှရှိပါက သင့်ရဲ့အစာကိုဝယ် နှင့်သင့်ခရီးစဉ်အတွင်းအဖျော်ယမကာ, အဆင်ပြေပါတယ်. ရထားပေါ်တွင်တစ်ဦးကမုန့်ညက်အလွန်အမင်းစျေးကိုအဆမတန်မြှမဟုတျပါဘူးနှင့်သင်မကြာခဏဈေးလျှော့ပေးကြောင်းကတ်များများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
မှတစ်ဦးကရထားကိုယူ Save-A-ရထား, သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရှေးခယျြနှင့်စျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးတတ်နိုင်စျေးနှုန်းများမှာလက်တွေ့ကျကျနေရာတိုင်းမှာဥရောပမှာမှရထားယူ! နှင့်, ဘာလို့ထင်လဲ? သငျသညျကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်သင်၏ရထားလက်မှတ်ရသည့်အခါ, အဆိုပါဘွတ်ကင်ဖြစ်စဉ်ကိုအတွင်းပြု3မိနစ်များ, ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့အိတ်ထုပ်ပိုး အောက်ပါအတိုင်းအရာအားလုံးကိုပျော်မွေ့!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/take-train-europe/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#nighttrain #traveleurope မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ traveltips